Abacre Point Tafaariiqda of Sale (POS) - Features Major
Abacre Point Tafaariiqda of Sale - Features Major
Gaaraan buuxda gacanta la this jiilka xiga software maamulka tafaariiqda.
Software Really caalamiga ah:
Abacre Point Tafaariiqda of Sale waxaa hadda lagu iibiyo ee 43 dal.
Waxa ay taageertaa goobo kala duwan oo canshuurta iyo qaabab lacag. Waxaa auto buuxin kartaa goobaha canshuurta dalalka caadiga ah iyo dhigayaa / gobol.
Waxaa suurtagal ah in ay si fudud u turjumaan software ah afaf kale tarjumaad fudud ee file qoraalka luqadda .
Shaqeeyaa dhamaan madbacadaha, gura lacag caddaan ah iyo ulo (qaab line) oo isticmaalaya 3 habab kale:
Darawaliinta OPOS (darawallada OPOS waxaa taageera dhan soo saarayaasha qalabka waaweyn ee: IBM, EPSON, Samsung iyo Star Micronics iyo kuwo kale).
Diritaanka amarrada toos ah raraa dekedaha COM
Horumariyo amniga iyo la dagaalanka burcad-khayaanada ilaalinta:
Files Database yihiin Windows XP, password.
Files Configuration yihiin sameesay.
Shaqooyin kala duwan: admin, khasnaji, karaaniga Tirin iyo tababare iibsigu leh mudnaanta kala duwan helaan.
Fursadaha aragti kala duwan, tusaale ahaan, button show saar Item; kaliya Admins saari karo item.
User interface Hagaajiyey:
Suurtagalnimada in uu dooran mawduucyada midab kala duwan, badhamada Wehliyaha oo darfahooduna.
Keyboard dalwaddii Full-ciyaaray inay la shaqeeyaan shaashado taabto.
4 noocyada kala duwan ee views alaabta menu iyo qaybaha: guluusyada, astaanta, liiska iyo faahfaahinta.
Customization ka mid ah noocyada iyo midabbo.
Dhammaadka Maalinta iyo Z-Out:
Ku qor bilow Cash (la warbaahinta hadal count).
Heshii hawlgal Cash khaanadda. Waxaa suurtagal ah in aan kaliya lacag kaash ah, laakiin sidoo kale hubinta iyo warbaahinta kale tirin. Waxa kale oo suurtogal u heshiisiinta khaanadda lacag caddaan ah dhowr jeer inta lagu jiro wareeg ah.
End of habka Day la fursadaha in xogta gurmad iyo dhoofinta xogta maalin kasta si software Tirin dhinac saddexaad.
Z-Out Cash khaanadda iyo warar Close Tafaariiqda Z-Out.
Shaqaalaha Clock In iyo Clock Out.
Qaababka kala duwan, tusaale ahaan, si toos ah saacad in / saacad walba soo login / logoff.
Login Quick isticmaalaya Employee Kaadhkaaga Card ama shaqaalaha barcode Card.
Shaqaalaha warbixin waqti.
Weighted Average, LIFO iyo FIFO hababka xisaabinta iyo agabka.
Alaabta farcan la subitems.
Qabsiga Tirin Jirka
Soo celi vouchers.
Shaqayn kartaa in network:
Waxaa suurtagal ah in la qeexo qaab dhismeedka network kala duwan, tusaale ahaan, laba kombiyuutarada ee amarada galaya, hal kombiyutar khasnaji iyo hal kombiyutar Tababaraha.
Heshii khaanadda lacag caddaan ah taliska si gaar ah loo xiro doonaa kasta khaanadda lacag caddaan ah iyo End of habka Day xirto doonaa dhammaan ka qaateen heshii.
Dacwadaha ku saabsan amarada:
Print Bill (Customization biilka sare, tusaale ahaan, qaybaha show; tirada koobi daabacan ee bill).
Qaado Payment (caawinaada galaya hababka lacag bixinta oo kala duwan oo isku mar ah muddo hal Si).
Real-mar processing credit card .
Soo celiyo si (waxa suuragal ah la item celinta amarka).
Discounts (laga yaabo in ay doortaan dhimis liiska sanyihiin dhimis).
Ka dhig Client (database ee macaamiisha in sidoo kale hayaa oo fursadaha si aad u baadhid macmiilka, eeg amarada la soo dhaafay ee macaamiisha).
Ka dhig Address Delivery.
Ka dhig modifiers item.
Fursadaha si dheeraad ah:
Amarada Filter by status (furan, la xiray, heshii, iyo z-xiray).
Amarada Filter taariikhda.
Search for amaro uu macmiilku, khasnaji, workstation iwm
Add item la isticmaalayo habab kala duwan: by code item ama barcode, by xulashada liiska agabka, iyadoo lagu eegayo si toos ah iyadoo la isticmaalayo akhristaha barcode (scanner).
Supports Alaabta serialized (alaabta la lambarka aqoonsiga) .
Taageerada waxyaabaha la taariikhaha uu dhacayo .
Taageerada alaabta la canshuuro oo aan la canshuuri karo. Suurtagalnimada in doorasho cashuurta shaqsi shay kasta.
In si ay u muujiyaan weydiiso hadal Price waxyaabaha la doonayo.
Item ayaa sawir / icon.
Maareynta agabka calanka.
Qofka dirayo Email u soo dirto email in Macaamiisha, Ganacsato ama Shaqaalaha.
Set Buuxda warbixinno:
Sales by maalin
Sales by todobaadka
Sales by bil
Sales by sano
Sales by maalinta toddobaadka
Sales by qaybaha
Sales by item menu
Sales by khasnaji
Sales uu macmiilku
Sales by habka lacag bixinta
Canshuurta iibka Collected
Z-Out Cash khaanadda
Z-Out Close Tafaariiqda
Inventory Dhinaca by Items
Inventory Dhinaca by Inventory Categories
Inventory Dhinaca by Item Categories
Macaashka hka by Items
Macaashka hka by Item Categories
"Sannado aan isticmaalo mid nidaam POS makhaayad MS-DOS ilaa aan ugu dambayntii helay badal wanaagsan Windows-ku salaysan: Abacre Point Restaurant ee Sale. Waxaan u marka la barbar dhigo barnaamijyo kale oo badan oo aan joojiyay on ARPOS, sababtoo ah waxa ay si fiican loo sameeyo iyo sidoo-hoodu. Sidaas awgeed, waxaan soo iibsaday kormeerayaasha screen taabashada, kombiyuutarada cusub iyo ARPOS. Isbedelka ka nidaamkii hore MS-DOS nidaamka cusub ee Windows-ku salaysan ahaa yaab leh: in ARPOS aan u isticmaalno images alaabta menu ee navigation si degdeg ah, war cajiib ah oo barnaamijka laftiisa waa wax configurable iyo anfac leh. Tan iyo waqti in aan ahay taageere kama dambaysta ah ee ARPOS oo aan ku talinaynaa in aan saaxiibo ganacsiga. "